Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la sheegay in Diyaarad hub sida uu ka dajiyay Magaalada Baydhabo « AYAAMO TV
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la sheegay in Diyaarad hub sida uu ka dajiyay Magaalada Baydhabo
485 Views Date March 24th, 2014 time 10:15 am
Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) ayaa ku eedeeyay Xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan in Diyaarad Hub sida uu shalay ka dajiyay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho in shalay ka duushay diyaar sida hub badan oo ka kooban Aakayaal iyo Dabajeexyo lagana dajiyay Magaalada Baydhabo.
Xildhibaanka ayaa ku eedeeyay Hubkaasi in uu leeyahay Shariif Xasan Sheekh Aadan uuna ugu tala galay in uu ku qaso Magaalada Baydhabo , waxa uuna wax lala yaabo ku sheegay in Garoonka Aadan Cadde laga soo duuliyo hub sharci daro ah.
‘’Diyaarada kasoo duushay Garoonka Aadan Cadde waxa ay siday hub badan oo isugu jira aakayaal iyo Dabajeexyo , waan kula xisaabtamaynaa saraakiisha amaanka ee Garoonka sida hub sharci daro ah garoonkaasi looga soo raray laguna keeay Baydhabo ‘’ ayuu yiri Sheekh Aadan Madoobe.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa dhinaca kale ku eedeeyay shaqaaqooyinkii shalay Baydhabo ka dhacay in uu masuul ka ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan , waxa uuna xusay Madoobe Sheekh Aadan in Magaalada Baydhabo uu hada ka jiro maamul ay dadku doorteen oo sharci.
Hadalka Sheekh Aadan Madoobe ayaa imaanaya xili maalintii shalay Magaalada Baydhabo uu tagay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo gacan weyn ka geesanaya dhis ida Maamul Gobleed la magac baxay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban ilaa Sadax Gobol.